BBC Somali - Warar - UK oo xasillooni ka raadineysa G. Afrika
UK oo xasillooni ka raadineysa G. Afrika
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 9 Mey, 2012, 13:49 GMT 16:49 SGA
Boqoradda Britain, Elizabeth, ayaa sheegtay in dowladdeedu ay ka shaqeyn doonto sidii xasillooni looga heli lahaa Geeska Afrika.
Hadal ay sannadkiiba mar ka jeediso Baarlamaanka oo lagu qeexo siyaasadda ay dowladda Britain ku shaqeyneyso ayaa waxaa ay ku tilmaantay in dowladdu ay ka shqeyn doonto in aan huba Nukliyeerku baahin.
Waxay sheegtay oo kale in dowladdu ay taageeri doonto sidii madaxbannaani siyaasadeed iyo mid dhaqaale ay u gaari lahaayeen waddamada Bariga Dhexe iyo Woqooyiga Afrika ee ku jira xaaladda kala guurka ah.
Waxaa muuqata in dowladda britain oo bishii February marti gelisay shir madaxeed arrimaha Soomaaliya lagu gorfeeyay, ay weli siyaasaddeeda ka mid tahay in ay sii daba joogto Soomaaliya si xal looga gaaro.
90 qof ayaa lagu xukumay puntland